Shaqaalaha ceymiska iyo xilliga shaqo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqaalaha ceymiska oo cadaadis shaqo saaran tahayla xiiyo bukaanka
Shaqaalaha ceymiska iyo xilliga shaqo
Publicerat måndag 28 februari 2011 kl 12.00
Toddobo kamid ah tobankii qof ee ka shaqeeya xafiiska ceymiska ee försäkringkassan ayaa dareemaya cadaadis xagga waqtiga shaqada ah. Iyadoo lugu wado tirro u dhiganta 600 oo qof oo heysta shaqada buuxda laga dhimayo shaqooyinka dowladda.
Chiristina Eklof waa wakiilka badbaadada shaqaalaha, waxaa ay wel wel ka qabtaa shaqaalaha dhimista lugu sameynayo. Waxaa ay sheegtay in cadaadis aad u weyn ay dowladu saaran tahay shaqsi ahaana aysan ka warqabin sida looga bixi karro culeyska xagga cadaadiska ah ee jira.
” Culeys shaqo ayaa maanta jirta waana mid sharuudaha saameyn ku yeelanaya howlaheena, gaar ahaan xagga tayada iyo amniga” Chirstina waxaa kale oo ay sheegtay in tirro koobkii ugu dambeeyey ee shaqaalaha laga sameeyey ayey 68% dareemayaan cadaadis shaqo. Maaliyaddii ugu dambeysay ee ay dowlada ugu talagashay xafiiska ceymiska ayey lugu sheegay in la dhimayo dhaqaalo gaaraya 300 oo malyan oo karoonka iswiidhish-ka ah. Tan iyo inta laga gaarayo sanadka 2013-ka.